ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာပွဲတော် - JAPO Japanese News
သော 31 May 2019, 21:32 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပွဲတော်ကို နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတယ်ဆိုတာ သိပါသလား?
ပြီးတော့အဲ့ဒါက ဘာပွဲတော်လဲဆိုတာကိုရော သိပါသလား ?
၅ လပိုင်း ၂၅ ရက်နေ့ နဲ့ ၂၆ ရက်နေ့ တိုင်းမှာ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့ရာ ၆ ကြိမ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီး 「ミャンマー祭り2019」 ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာပွဲတော်ကို တိုကျိုမြို့ ဇိုးဂျောဂျိ မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲတော်က နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း လူအယောက် ၆ သောင်းဝန်းကျင်လာရောက်တဲ့ ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်လူတွေအများကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာတစ်ခုပဲနော် ！
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာပွဲတော်ကြီးက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မြန်မာပွဲတော်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုဖလှယ်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာလည်း ၆ ကြိမ်မြောက် ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတင်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း အများကြီးလာရောက်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေသလိုမျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံချည်ဝတ်ထားတဲ့သူတွေကို အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲထဲမှာ အစားသောက်တွေကို ရောင်းချပေးထားပြီး မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ထမင်းကျော် စတဲ့မြန်မာအစားအစာတွေကို ဝယ်ယူစားသုံးလို့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး ခန်းမရဲ့အတွင်းထဲမှာ စတိတ်စင်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအကအလှတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပွဲတော်အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့အကသမားတွေ နဲ့ ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေက လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ကပြဖျော်ဖြေသွားတာတော်တော်ကို လှပါတယ်။
ဒီပွဲရဲ့　တိုင်းရင်းသားဖွင့်ပွဲအကကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…
2019 MYANMAR FESTIVAL??ဖြင္႕ပဲြ တိုင္းရင္းသားအက ??အတတ္နိုင္ဆံုးျကိုးစားျပီး ညီေအာင္ကေပးတဲ႕ Performer တေယာက္စီတိုင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အျမဲတမ္း အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကကြက္ေတြစဥ္းစားျပီးသင္ေပးတဲ႕အကဆ၇ာမ မမိုး ကိုလည္း ေက်းဇူးအမ်ားျကီးတင္ပါတယ္ ?
Thandar Khine Ayeさんの投稿 2019年5月25日土曜日
မြန်မာလူမျိုးတွေတင်မဟုတ်ဘဲ ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်း မြန်မာအကကို သေချာသင်ယူပြီး ကပြဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး အကအလှတွေအပြင် သီချင်းတွေနဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဖျော်ဖြေရေးအစီအစဥ်တွေအပြင် မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာလို့ရတဲ့နေရာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာပွဲတော်ဆိုတာက ဂျပန်လူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပိုပြီး အကျွမ်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့မှာလည်း အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဥ်ကျေးမှုတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ဗီဇာမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လို့မရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပေမယ့် ေယခုချိန်မှာတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို လွယ်လွယ်ကူကူလာရောက်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အများကြီးလာရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပြီး ဝမ်းသာစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။